Posted By: KongoLisolowaa: Febraayo 15, 2020 12: 30 No Comments
Waxaad naftaada ku qaadataa farxad, laakiin farxaddaani waxay kuxirantahay abaabulida sirdoonkaaga, qalbigaaga iyo rabitaankaaga, markaa waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad isticmaasho shuruudahan. ...	Akhri wax dheeraad ah
Dooddu way furan tahay! Sida Kitaabka Quduuska ahi leeyahay: waayo, Rabbiga qudhiisu ayaa xagga samada codkiisa iyo malaa'igta sare iyo codkooca buunka Ilaah ka soo dejin doona oo ka soo degi doona samada,	Akhri wax dheeraad ah
Waa inaan sidoo kale aqoonsanaa dhaqannada ugaarsadeyaashayada: Maxay tahay sababta aan u aqoonsaneyno dabeecadda ugaarsadeyaashayada? Sababtoo ah waxay awood u yeesheen inay si qallafsanaan leh u geliyaan maskaxdeena hurdada iyagoo naga dhigaya aaminsanaanta in Jannadaheenna aysan ahayn farxadda ay taajiriinta Afrika siiso, laakiin ay tahay raaxo mala-awaal ah dhimashada ka dib.
Haddii negro si fudud loogu maamusho oo uu saameyn ku yeesho caddaanka, ilaa heer gaarsiinta cadaanka loogu talagalay walaalihiisa iyo walaalihiisa madowga ah, taasi waa mid fudud sababtoo ah ninka cadaanka ahi wuxuu ku guuleystey inuu cadaadiyo adduunka madow.
Qorshaha diimaha reer galbeedka: "U kala kaxee si ka wanaagsan, xukun" Matayos 10: 34-35; ha u malaynina inaan u imid inaan nabad dhulka u keeno; Uma aan iman inaan nabad keeno, laakiin inaan seefta keeno. maxaa yeelay waxaan u imid inaan kala saaro Wiil iyo Aabihiis, inta u dhaxaysa gabadha iyo hooyadiis, oo u dhaxaysa gabadha soddohda iyo soddoweeda
Feb24 02: 27
HI / LO: 41 / 33 ℉
HI / LO: 33 / 27 ℉
HI / LO: 31 / 23 ℉